Gịnị bụ nnabata ma ọ bụ nnabata web? | ECommerce ozi ọma
José Ignacio | | Eziokwu na akụkọ, eCommerce, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Otu ebumnuche bụ isi iji zụlite weebụsaịtị nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị bụ nnabata ya. Nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke usoro ịmalite ịmalite ịgbasa ma ọ bụ kwalite ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu ọ na-ere ahịa. N'ihi nke a, ọ dị ezigbo mkpa na a rụrụ ya na oke arụmọrụ ma nwee ike imetụta ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa.
El nnabata websaịtị Emepụtara ya n'ime ihe a na-akpọ nnabata. Nke a bụ echiche jikọrọ na teknụzụ ọhụrụ nke pụtara ọrụ na-enye ndị ọrụ withntanetị usoro iji nwee ike Echekwa ozi, onyonyo, vidiyo, ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla enwere ike ịnweta site na weebụ. Ọ ghaghị ịbụ arụmọrụ nke a ga-eme atụmatụ ka ihe ọ bụla ghara ịhapụ imezigharị.
N'okwu a n'ozuzu ya, ekwesiri ighota na nnabata ma obu nnabata web di oke nkpa maka onodu nke ulo oru dijitalụ n'ihi na o na enyere ya aka itinye onwe ya visibiliti karịa n'ihu ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa. Ruo n'ókè ọ dị oke mkpa ịhọrọ nkenke ma ọ bụ kacha dabara adaba iji chọpụta ma ọ bụ ọganiihu nke omume gị.
1 Kedu ihe na-akwado maka?
2 Klaasị Bochum nke dị
3 Nnwekọrịta Bochum
4 Ọkachamara ọkachamara
5 VPS nkesa
6 Sava raara onwe ya nye
Kedu ihe na-akwado maka?
Uru nke ụdị Bochum weebụ a sitere n'eziokwu ahụ bụ na ọ dị ezigbo mkpa ka ebe nrụọrụ weebụ gị na-adị n'ịntanetị mgbe niile ma dị na njedebe. Karịsịa n'ọnọdụ ndị ahụ ụlọ ọrụ na-ere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya mere na ọ dabere na ọrụ a karịa ndị ọzọ. Mgbe n'aka nke ọzọ, ọ na-adaba adaba icheta na ọbụlagodi na ị nwere njikọ itntanetị ezughị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, nke kacha mma nhọrọ bụ gbazite ọrụ nlekọta weebụ nke ahụ dị irè ma nwee ike igbo mkpa gị.
Akụkụ ọzọ nke ị ga-enyocha maka uru ọ bara bụ nke metụtara uru ọ nwere ike ịnye gị n'oge a. Otu n'ime ha bụ ihe ndị anyị ga-egosi gị n'okpuru:
Ọ na - ewelite nchekwa nke ngalaba gị site na ịnye sistemụ a pụrụ ịtụkwasị obi nke, karịa ihe niile, dị oke elu na nkwa ndị ọ na - etinye Abụọ n'ihe banyere ngwaike na ngwanrọ.
Ọ bụ usoro dị oke mkpa iji jigide njikọ ndị nwere nchebe n'ezie, na-adịgide adịgide ma kwụsie ike. Ihe ndị dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ejikọ weebụsaịtị ahụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị.
Ọ bụ ngwaọrụ dị ike nke ebumnuche ya bụ iji zere ọdịda ma ọ bụ njehie na ọrụ ndị ahụ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, na azụmaahịa ọnlaịnụ ọ bụla omume ndị a nwere ike bụrụ oke ọnụ, ma site na azụmahịa na nke akụ na ụba.
N'ikpeazụ, nyekwuo ndị na-egosipụta ọdịnaya nke weebụsaịtị ahụ ọhụụ, ma n'okwu ederede ya ma n'ihe banyere ihe nkiri.
Klaasị Bochum nke dị
Otu iwu dị mkpa ị kwesịrị iburu n'uche site ugbu a gaa n'ihu bụ na nnabata ma ọ bụ nnabata web abụghị otu. Nke ahụ bụ, enwere ike ịnwe ọtụtụ ụdị dabere na ezigbo mkpa nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa. Nke a na omume pụtara na dabere na ụdị weebụsaịtị ị nwere ma ọ bụ ịchọrọ ịmepụta, ị ga-achọ ọrụ nnabata ma ọ bụ ọzọ. Ya mere, n'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịrụ ọrụ ha nwere ntụkwasị obi na ịdị ukwuu ka ukwuu maka ọdịmma nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. N'ime ndị na-apụta ìhè na ndị na-esonụ na anyị ga-ekwu n'okpuru.
Otu n'ime ihe ndị kachasị na-eme n'oge na-adịbeghị anya n'ihi nnukwu ọrụ ya na nke ahụ na-enyekwa gị ohere zọpụta ọtụtụ ego n'ime ihe atụ ọ bụla o nwere ike ibili. Mgbe nke ọzọ, ọ ga-adabere na atụmatụ ị họrọ maka weebụsaịtị gị. Ruo n'ókè na n'ikpeazụ ị ga-enwe ike ịnweta ọtụtụ weebụsaịtị akwadoro na otu nnabata. Ihe kachasị mma banyere atụmatụ a bụ na ọ ga-adị mfe ịme ya karịa site na nchịkọta ndị ọzọ dị mgbagwoju anya ma ọ bụ dị elu. Ebee ka ị gaghị enwe ụgwọ achọghị ma ọ bụ naanị ihe ị na-atụghị anya ya.
Ihe njiri mara ya gụnyere eziokwu bụ na ọ na - eme ka ike karịa ya na - enweghị oke. Na onyinye nke teknụzụ innovations ọtụtụ ihe ndị ọzọ elu karịa ndị ọzọ, dị ka na bandwitCPU ike na ebe nchekwa dị ike karị. N'ezie, ha na-elekwasị anya na ndị ọkachamara, dịka okwu ikpe nke ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. Na ọtụtụ ọtụtụ na kọwaa ọrụ site na mmalite.
Ọ bụ ihe a maara dị ka ihe nkesa nzuzo nke onwe ya na otu n'ime nnukwu uru ya bụ na ọ na-enye ukwuu mgbanwe na ihe ndi emeputara. N'echiche na ọ na-enye gị ihe ejiri n'aka, nke ejiri ihe niile mara n'ihi na ha anaghị ekenye onye ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ọ pụtara n'ihi na ọnụ ahịa sava nwere njirimara ndị a na-adịkarị ala karịa nke ihe nkesa nkịtị.
Sava raara onwe ya nye
Ọ bụ otu n'ime sava nke ọtụtụ ndị ọrụ na-amachaghị. Nke a bụ n'ihi na a kọwara ya site n'igwe arụ ọrụ nke kwekọrọ na kọmputa etiti ya wee dọrọ ya a ahịa pụrụ icheoo nanị. N'echiche, na ha bụ ndị sava kachasị enyere aka maka weebụsaịtị yana nnukwu olu nke kwa ọnwa. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, ọ nwere ike ịnwe ohere itinye ya n'ọrụ ebe ọ bụ na arụmọrụ ya kachasị arụ ọrụ nke ọma karịa ụdị ndị ọzọ.
Ruo n'ókè nke na ị ga-enwe ike ịba uru maka omume ka mma maka ọdịmma azụmahịa gị. Tụkwasị na nke a, ị gaghị echefu na nke a na klas a nke sava pụrụ iche dị iche site na iji oke ojiji site na ọgwụgwọ dị iche na ndị ọzọ. Iji uru ọ na-enye gị nhọrọ nke ịnyefe ya na onye ọzọ na-eweta ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Gịnị bụ nnabata ma ọ bụ nnabata web?